Umcimbi omkhulu kakhulu weqembu lamaMahima owaziwa ngokuthi 'uMagha Mela' owaziwa nangokuthi 'Joranda Mela', waxoshwa endlunkulu yayo yomhlaba wonke e-Odisha kaJoranda eDhenkanal. I-extravaganza yamasiko idonsela ama-lakhs abazinikele abavela ezigabeni ezahlukene ze-Odisha nabazinikezeli abavela ezindaweni ezihlukene zaseNdiya futhi ikakhulukazi abavela e-Assam, e-Andhra Pradesh naseChhattisgarh babuthana ukuze bakhokhele ukukhothamela ethempelini.
Izazi-mlando zikholelwa ukuthi, ngasekuqaleni kwekhulu leshumi nesishiyagalolunye nezingqikithi zokunyakaza ngeHindu ukuletha ukuguqulwa, ukunyakaza kweMahima kwabonakala ku-Odisha. UMahima Gosain noma uMahima Swami umsunguli weMahima Movement wayengumzimba kaParam Brahma futhi wasebenzisa impilo yakhe e-Himalaya ngaphambi kokuba avele ePuri. Ukusakaza inkolelo ye-Advaita bada okusho ukuthi uNkulunkulu munye; akukho okungaphezu kukaNkulunkulu oyedwa, uMahima Gosain wazama ukusungula umbono wakhe ngaphambi kwenhlangano yamadoda afunde ePuri Temple eyaziwa ngokuthi ngu Mukti Mandapa Sabha. Phakathi nalesi sikhathi wayehlala emanzini futhi, ngakho-ke, wayebizwa ngokuthi 'Nirahari Baba'.
UMahima Gosain ushumayela inkolo yakhe entsha kaMahima Dharma noma uSatya Mahima Dharma ezifundeni zaseCuttack, ePuri, Ganjam naseMelika e-Dhenkanal, Athagarh, eHindol, Boudh, eSonepur nasezindaweni zaseSambalpur nase-Angul futhi eheha inani labafundi ikakhulukazi phakathi kwezicukuthwane kanye namakilasi ayebhekwa njengaphansi e-Brahmanical authority.
Abalandeli bakaMahima noma i-Alekha kubonakala sengathi bahlukaniswe ngamahlelo amathathu, amaKumbhipatias, amaKanapatias nama-Ashritas. I-Kumbhipatias isebenzisa amahlumela esihlahla esibizwa ngokuthi iKumbhi [careya arborea] kanti amaKhanada asebenzisa izicucu zokugqoka. Banamakhanda abo abathintekayo, abathwele izinti kanye ne-disc-like palmleaf parasols. I-Ashritas ayilahli izwe futhi isebenzisa izingubo ezibomvu ezibizwa ngokuthi i-kasa noma i-Gairikabasana njengeBrahmachari noma i-Jogi. Ngokuphawulekayo, abangcwele bahlukaniswe ngamaqembu amabili-Koupunidhari Samaj noBakaladhari Samaj-babheka i-142nd 'Baba Purnima' kulo nyaka.
Phakathi naleso sikhathi, ukutholakala kwabazinikelayo, imikhuba izoqala ngoJanuwari 30 ngokuvula iminyango yethempeli noJhadu Neeti ku-3.15 AM elandelwa nguCheera Lagi Neeti ku-4.45 AM. KuJhadu Neeti, izitsha zesiliva zisetshenziselwa ukuthwala amanzi amasiko angcwele nempahla yegolide yokufafaza kwamanzi ase-sandalwood. Kamuva ku-5 AM, iminikelo eyisikhombisa enkulu eyaziwa ngokuthi yi-bhog yayinikezwa onkulunkulu.
I-mela ihlelwe njalo ngonyaka yihlelo kusukela ku-1876 ngemuva kokushona komsunguli wayo uMahima Swami. Abalandeli behlelo kanye nomphakathi jikelele baqoqa lapha ngezinombolo ezinkulu zomcimbi waminyaka yonke. Ngemva kokufa kukaSwami, abalandeli bakhe bakhela ithempeli elikhulu ethuneni lakhe, bengenawo umnyango ethempelini njengoba kwakungekho isithombe okufanele sikhulekelwe. Bakholelwa ukuthi unkulunkulu akanalo isimo esiqondile, ubukhulu, umbala noma iphunga. Njengomlando, uSwami, owaziwa ngokuthi nguJogeswar Das, wabona ukulahlwa okujulile e-Himalayas phakathi kwe-1802 no-1810. Ekugcineni, wakhetha uJoranda njengendawo yakhe yokuhlala.
Inkolo yamaMahima ishumayela ubuzalwane bomhlaba wonke, hhayi ubudlova, umakhelwane omuhle, ukuhlala ngokuthula, inkululeko yokuhaha, umusa kubo bonke kuhlanganise nezinyoni, izilwane nezinambuzane. Leli qembu lePuritanism elingenalutho laheha abafundi abavela emizimbeni nasezindlini ze-Schedule hhayi kuphela ku-Odisha kanye nasezindaweni ezahlukene ze-India.
01 / 30 / 2018 kubhulogi
Thola i-Odisha Winter Tour